Uhlu lwezifiso Zokumaketha Amabhizinisi Amancane luka-2014 | Martech Zone
Uhlu lwezifiso Zokumaketha Amabhizinisi Amancane lwango-2014
Kungenzeka yini ukuthi u-2014 kube unyaka lapho sonke siyeke ukujaha izinto ezicwebezelayo sibuyele kumasu wokuthengisa azamile futhi ayiqiniso? Mfana, ngithemba kanjalo… sabona izinkampani eziningi zigijimisa izitayela ezihlanyayo eminyakeni embalwa edlule. Ngesikhathi isabelomali sabo soma ngaphandle kwemiphumela, yingakho ekugcineni bezosishayela ucingo. Kwakuningi kakhulu ukubalwa futhi kwajika isisu sami ngibuka ezinye zezinkampani zobuchwepheshe kanye nama-ejensi akhipha imali futhi athatha amathani emali kuzabelomali eziningi zamabhizinisi amancane athembekile.
Ngokusho the j2 Ucwaningo Lomhlaba Wonke:
I-28.16% ifuna ukukhulisa ukutholakala kwayo online, njengokusetha iwebhusayithi noma isitolo esiku-inthanethi.
I-23.61% ifuna ukwamukela ukuzenzekelayo kokumaketha kwe-imeyili ukuze ifinyelele kalula nakanjani kahle kumakhasimende.
Ama-20.52% afuna ukusebenzisa i-imeyili ukukhuthaza ngempumelelo ukudluliselwa nokwabelana ekuxhumaneni nomphakathi.
I-13.76% ifuna ukusebenzisa izindlela ezinhle zokumaketha kwamaselula ze-imeyili nokwenziwa kwewebhusayithi.
U-11.05% ufuna ukuqinisekisa ukuthi imizamo yabo yokuthengisa ye-imeyili ayigcini kuzihlungi zogaxekile noma kumathebhu we-Gmail.
Ngiyafisa ukwazi ukuthi ngikuphi amasu wokumaketha amavidiyo bebesesifundweni. Uma bekukhona igebe ngokombono wami, bekungaba ukuthi amabhizinisi amancane manje angabhalisela izinsizakalo eziningi ezingabizi kakhulu zokukhangisa ngevidiyo ukukhipha umyalezo wazo. Lokhu kuzobasiza bancintisane nezabelomali ezinkulu kakhulu kunezabo futhi banqobe.
Tags: Uhlu lwezifiso luka-2014imeyilij2 Umhlaba jikelelej2 Isibikezelo Somhlaba Wonkej2 Ucwaningo Lomhlaba WonkeUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukumaketha amaselulaIbhizinisi elincane
I-Goodbye ne-Good Riddance to Marketing ngo-2013